ါမြို့စား မင်းသားဟာငပိရည်ဖျော်နဲ့ကြက်ဟင်းခါးအ ရွက်ရေနွေးဖျောလေးတို့စားရတာအလွန်ထ မင်းမြိန်တာနဲ့ သူ့နောက်ပါ ဝန်မင်းတွေကိုလဲ ကြက်ဟင်းခါးရွက်တို့ကြည့်ဘို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီထမင်းပွဲမှာအမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦးလဲပါဝင် ခဲ့ပါတယ်။
á€á€­á€¯á‚”á€¡á€˜á€œá€½ á€¡á€±á€›á€¸á€¡á€žá€¬á€¸á€±á€á€¼ á€±á€»á€•á€¬á€„á€¹á€¸á€œá€²á€œá€¬á¿á€•á€®â€¬(Naing Gyi)
ကျနော်တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တုန်းက ကျနော်အပါအဝင် ရဲဘော်အများစုဟာ ရှေ့တန်းဘဲထွက်ခြင်နေကြတာဗျ - ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ရှေ့တန်းမှာက သွားမယ်လာမယ် ရန်သူတွေ့ရင်စစ်တိုက်မယ် ပရက်ရှာမရှိဘူးစိတ်မညစ်ရဘူး ၊- နောက်တန်းရောက်တာနဲ့
á€œá€½á€±á€†á€¼ á€á€²á€·á€€á€¼á€±á€”á€¬á€¹ (Aung Kyaw Moe)
ဦးလှဆွေတစ်ယောက် ဂန့်ဂေါမြို့. ထဲလျောက်ကြည့်လေ့လာနေသတဲ့
တစ်နေရာရောက်တော့ ကလေးတစ်ယောက်အိမ်ရှေ့မြေကွက်လပ်မှာ နောက်ဆုံးပေါ်ရီမုကွန်ထရိုးကား နဲ့ဆော့နေတာတွေ့တယ် -- "ဟေ့ ကောင်လေး မင်းဘာလုပ်နေတာတုန်း"
á€€á½á€¼á€”á€¹á€±á€á€¬á€¹á€á€­á€¯á€¯á‚” á€™á€ºá€€á€¹á€€á€”á€¹á€¸ á€”á€­á€¯á€¯á€„á€¹á€„á€¶(Zaw Htike)
ရွာတစ်ရွာတွင် သူကြီး လုပ်သူက လူတွေကို မျက်စိကန်းအောင် လုပ်ထားလိုက်သည်။ နှစ်ပေါင်း များစွာ ကြာလာတော့ လူတွေကအမှောင်နဲ့ အသားကျလာသည်။ အလင်းရှိတယ် ဆိုတာကို မသိတော့။
More 20 Sep 2015
á€‘á€°á€¸á€†á€”á€¹á€¸á€±á€žá€¬á€á€­á€¯á€„á€¹á€¸á€»á€•á€Šá€¹(Lwin Thandar Soe)
á€„á€›á€²á€»á€•á€Šá€¹á€€ á€±á€»á€•á€¸á€œá€¬á€á€²á€· á€»á€á€±á€žá¤á€·(á€†á€›á€¬á€±á€–á€»á€™á€„á€¹á€·)
ကေသရာဇာ ခြင်္သေ့ ကွယ်လွန်သည့်အခါ ငရဲပြည် ရောက်သွားသည်။
ငရဲပြည်မှန်းသိတော့ သူ အကြီးအကျယ် ထိတ်လန့်သွားသည်။
ပြီး၊ အံ့လည်း အံ့အားသင့်သည်။ ငရဲပြည်ဆိုတာ လူတွေ ရောက်တဲ့ နေရာပဲ၊ ငါနဲ့ ဘာဆိုင်သလဲ။
á€€á€¯á€­á€šá€¹á€•á€­á€¯á€„á€¹á€¡á€¯á€•á€¹á€á€ºá€³á€•á€¹á€á€¼á€„á€¹á€· á€±á€á€¬á€„á€¹á€¸á€á€¶á€»á€á€„á€¹á€¸(á€…á€­á€¯á€±á€»á€• )
‘ဝ’ ဆိုသည့် လူမျိုးတွေက သူတို့ကို ပြည်နယ်အဆင့် တိုးမြှင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်သည်။ - ‘ဝ’ တွေ ဦးစီးကျင်းပသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ ညီလာခံတွင် တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး တက်ရောက်သည့် အဖွဲ့အစည်း တွေကလည်း လက်ခံကြသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုသတင်းကို ရွာက လူတွေကို ပြောပြတော့....
After you (or) After me?(á€¥á€®á€¸á€˜á€¯á€”á€¹á€¸(á€“á€¬á€á€¯) á€™á‚á±á€±á€œá€¸)
ဲ့ လေယာဉ်ဆီကို လေယာဉ်စီး ခရီးသည် တွေ သယ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။
လူတွေဟာ ဘတ်(စ်)ကားပေါ်ကို အလုအယက်ပဲ တိုးဝှေ့တက်ကြတယ်။
More 04 May 2015
á€á€Šá€¹á€±á€†á€¬á€€á€¹á€™á‚ˆ á€™á€›á€½á€­á€±á€žá€¸á€˜á€² á€±á€•á€«á€€á€¹á€€á€› á€±á€œá€½á€ºá€¬á€€á€¹á€±á€»á€•á€¬ á€±á€”á€›á€„á€¹á€±á€á€¬á€·(á€€á€­á€¯á€¯á€‘á€¯á€¯á€­á€€á€¹)
အန်ဒီဝါးဟုိုးလ် (Andy Warhol) ဆိုတဲ့ အနုပညာရှင်က မော်စီတုန်းဓါတ်ပုံကို .နှုတ်ခမ်းအနီရောင်ဆိုးပြီး ပရင့်ထုတ်ပြီး သူ့အနုပညာပစ္စည်းပါလို့လုပ်တယ်။ လူတွေ အများအပြားက တန်ဖိုးရှိ အနုပညာပစ္စည်းလို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။